UBunewunewu baBucala IGUMBI ELITSHA-7 imiz ukuya eGlacierLagoon #4 - I-Airbnb
UBunewunewu baBucala IGUMBI ELITSHA-7 imiz ukuya eGlacierLagoon #4
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguEllert Baldur
UEllert Baldur yi-Superhost
Eli gumbi litsha kraca labucala elinomnyango wabucala libekwe kwindawo eyodwa, libekwe kanye phantsi kweentaba, ngaphantsi kweengxangxasi, elinomkhenkce kwicala elinye kunye nombono ocacileyo wolwandle! Ngaphantsi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba usuka kwi-Glacier lagoon, le dolophu yasemaphandleni ibe yenye yezona ndawo zikwanti e-Iceland, kodwa ngoku ibonelela ngemisebenzi emininzi kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola unxweme olusemazantsi. Igumbi liqaqambile kakhulu kwaye libandakanya igumbi lokuhlambela labucala elineshawari yokuhamba ngemvula.
Igumbi lethu elitsha kraca linayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi. Kananjalo sinamanye amagumbi ambalwa endlwini esirentayo, ngoko ke ukuba ufuna amagumbi amaninzi, nceda usazise.
Eli likhaya lethu labucala eli lizwe hayi indlu yeendwendwe ngoko ke nceda uhloniphe ubumfihlo belinye icala lendlu.
Igumbi alizi nekhitshi okanye nayiphi na enye indawo eqhelekileyo kodwa sinokucebisa iindawo zokutyela kule ndawo.
4.80 · Izimvo eziyi-257
Ngowona mkhenkce mkhulu eYurophu ngokwenyani kwigadi yakho, ikhaya lethu likwindawo ekhethekileyo kuye nabani na owonwabela ngaphandle. Ukunyuka ukuya kwingxangxasi emva kwendlu kwaye ukonwabele ukutshona kwelanga okuhle kunye nembono yepanoramic yolwandle. Okanye ujonge ngamehlo abomvu ngaphandle kwendlu yethu ngoxa ubukele izibane zasentla ebusika!
Le ndawo ibonelela ngamava amaninzi amnandi asuka kwichibi lomkhenkce, iibhawu ezishushu ze-geothermal, ukukhwela intaba, eyona ndawo ithengisa utywala/indawo yokutyela ekuMazantsi e-Iceland kunye ne-Þórbergssetur, imyuziyam kunye neziko lenkcubeko, elizinikele kumsebenzi we-Þórbergur, kuphela iikhilomitha ezi-2 kwimpuma ye-Reynivellir. Sicebisa kakhulu ukuba ukhenkethe imyuziyam.
Ngokwenyani awunakuba nesithukuthezi kule ndawo kwaye ukuba ufuna ukuya kukhenketho kukho ukhenketho lwe-ice-caving olukhoyo, i-kayaking kwichweba lomkhenkce kunye nendawo yogcino-zilwanyana apho eyona nkwenkwezi iphambili iyibhokhwe edumileyo yehlabathi, eyaziwa kakhulu ukusebenza kwiimuvi zaseHollywood!
Umbuki zindwendwe ngu- Ellert Baldur
Izimvo eziyi-2 634
Kukho ukuzijonga ngebhokisi yethu yesitshixo ngaphandle kwendlu. Sisoloko sifumaneka ngo-Airbnb okanye ngefowuni kodwa asihlali kuloo ndawo. Ukuvula ucango, kufuneka utsale iqhosha ngaxeshanye, hayi ngokuchasene newotshi njengeengcango ezininzi. Kusenokufuneka uyitsale kancinane (kufutshane nawe). Ucango lutsha kwaye lunokuqina kancinci.
Kukho ukuzijonga ngebhokisi yethu yesitshixo ngaphandle kwendlu. Sisoloko sifumaneka ngo-Airbnb okanye ngefowuni kodwa asihlali kuloo ndawo. Ukuvula ucango, kufuneka utsale iqhosha…